CJ Myanmar: August 2012
မန္တလေးမြို့၊ သြဂုတ်လ (၃၀)ရက်
မန္တလေးမြို့တွင် စက်တင်ဘာလ (၂)ရက်၊ (၃)ရက်၊ (၄)ရက်နေ့ များတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ရခိုင်အရေးအခင်း နဲ့ ပတ်သက်၍ သမ္မတကြီး၏ ရပ်တည်ချက်ကိုထောက်ခံပြီး မစ္စတာ ကင်တားနားကို ကန့်ကွက်ရှုတ်ချသည့်ပွဲ အကြိုလှုံ့ဆော်မှုနှင့် T-Shirt များ ရောင်းချနေသည့် ကား တစ်စီးအား မန္တလေး ကျုံးဘေးတွင် သြဂုတ်လ (၃၀)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက မြင်တွေ့ရပုံ
ဝီရသူ (မစိုးရိမ်) ဦးဆောင်ကျင်းပမည့် မြို့လုံးကျွှတ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ
မန္တလေးမြို့၊ သြဂုတ်လ (၂၉)ရက်
မန္တလေးမြို့ ၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ၊ ဓမ္မသဟာယကျောင်းနာယက ဆရာတော်ဘဒ္ဒ န္တဝိစိတ္တာဘိဝံသ - ဝီရသူ (မစိုးရိမ်) ဦးဆောင်ကျင်းပမည့် မြို့လုံးကျွှတ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကို မူလသတ်မှတ်ထားသည့် ၁.၉.၂၀၁၂ ရက်နေ့ ဝါခေါင်လပြည့်နေ့ဖြစ်နေ၍ စတုပစ္စယဆွမ်းဆန်တော် အလှုပွဲနှင့်သက်ဆိုင်နေသောကြောင့် လုံခြုံရေးမပေးနိင်ဟုဆိုကာ ရက်ရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ ခေါ်ယူညှိနှိုင်းရာမှ မန္တလေးမြို့ ၅မြို့နယ် တစ်ရက်ထဲ မကျင်းပနိင်တော့ကြောင့်သိရသည်။
ံမြို့နယ် ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် တို့တွင် ၂.၉.၂၀၁၂ (တနင်္ဂနွေနေ့)
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်တို့တွင် ၃.၉.၂၀၁၂ ရက် (တနလာင်္နေ့)
အမရပူရမြို့နနယ် ၊ ၄.၉.၂၀၁၂ ရက် (အင်္ဂါနေ့)တို့မှာကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ရခိုင်အရေးအခင်း နဲ့ ပတ်သတ်၍ သမ္မတကြီး၏ ရပ်တည်ချက်ကိုထောက်ခံပြီး မစ္စတာ ကင်တားနားကို ကန့်ကွက်ရှုတ်ချသည့်ပွဲဖြစ်သည်။
ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂလီများသည် တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ကြောင်း ကမ္ဘာကြီးကသိစေရန်။
ဘင်္ဂလီများ၏ အကြမ်းဖက်မှုကို မြန်မာပြည်ဖွား တိုင်းရင်းသားအားလုံးက ရှုတ်ချကြောင်း ကမ္ဘာကြီးကသိစေရန်။
ရခိုင်တံခါး နှင့် ရခိုင်ပြည်သူလုံခြုံရေးကို အစိုးရအစဉ်အဆက် အလေးနက်ထားနိင်ရန်။
အမှတ် (၁) ဗီနိုင်းမှာ သမ္မတကြီးပုံ နှင့် ကင်တားနားပုံတို့ပါဝင်ပြီး ၊ သမ္မတကြီးပုံကို အမှန်ခြစ်ကာ ကင်တားနား ပုံကိုကြက်ခြေခတ်ထားပြီး ၊ “သမ္မတကြီးကို ထောက်ခံခြင်းဖြင့် အမိမြန်မာပြည်ကို ကယ်တင်ပါ” ၊ စာတန်းပါဝင်သည်။
အမှတ် (၂) ဗီနိင်းတွင် သမ္မတကြီး နှင့် ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး မစ္စတာအန်တိုနီယိုတို့ပုံကိုနောက်ခံထားက သမ္မတကြီး စကား၃ခွန်းကို စာတန်းထိုးထားသည်။
၁ ။ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ခိုးဝင်လာသူများသည် နိင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပါ ခြိမ်းခြောက်လာ။
၂ ။ ရိုဟင်ဂျာများကို UNHCR သို့အပ်နှံပြီး ဒုက္ခသည် စခန်းအဖြစ်ထားရှိရမည်။
၃ ။ တတိယနိင်ငံများက လက်ခံမည်ဆိုလျှင် ပို့ပေးမည်။
ယခုဗီနိုင်း ၂ခုကိုသာ ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပြုထားပြီး လက်ကိုင်ဆိုင်းဘုတ်စာသား (၁၅)ခုကို ပိတ်ပင်လိုက်ကြသည်။
ဆန္ဒပြချိန်ကိုလည်း ၂နာရီမှ ၁နာရီလျှော့ချကာ စုရပ်များ ၊ ပစ်မှတ်များ ၊ လမ်းများကိုလည်း ပြောင်းရွှေ့ သတ်မှတ်ပေးကြပြန်သည်။
“၂.၉.၂၀၁၂-ရက် ဝါခေါင်လဆုပ် (၁) တနင်္ဂနွေနေ့မြို့နယ် နှင့် အချိန်ဇယား”
၁ ။ ချမ်းပေးသာဇံမြို့နယ် ၊ မွန်းတည့် (၁၂)နာရီ ၃၃လမ်းမှ-၇၉လမ်းအတိုင်း ၊ ၂၆ဘီလမ်းထိပ်မှာဆုံး။ (စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ၁နာရီတိတိသာ) – (၁၁း၃၀မှာ လုံခြုံရေး စချပေးမည်ဟုတ်ဆို)
၂ ။ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၊ မွန်းလွဲ (၁း၃၀)နာရီမှာ လူစု ။ လမ်း၈၀၃၅လမ်းမှာစုရပ် မွန်းလွဲ (၂း၃၀)နာရီခွဲမှာ လမ်း ၈၀ မှ ၃၅လမ်းအတိုင်း ၈၄လမ်းအထိ ၊ ၈၄လမ်းအတိုင်း ၃၅လမ်းမှ၃၉လမ်းထောင့် ပေါင်းလဲတိုက်အထိ။ (ပေါင်းလဲတိုက်မှာပြီးဆုံး ၊ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ၁နာရီတိတိသာ)
၃ ။ အောင်မြင်သာဇံမြို့နယ် ၊ ညနေ ၃နာရီမှာ လူစု။ ၁၂လမ်း-လမ်း၈၀ ၊ ကျုံးအနောက်မြောက်ထောင့် စုရပ် ၊ ညနေ (၄း၀၀)နာရီမှ စတင်လှည့်လည်။ ကျုံးအနောက်ဘက် လမ်း၈၀အတိုင်း တောင်ဘက်သို့ချီတက်။၁၉လမ်းရောက်လျှင် အနောက်ဘက်ကွေ့ ၈၆လမ်းအတိုင်း ညောင်ပင်ဈေးအထိ ချီတက်။ ညောင်ပင်ဈေးမှ ၁၂လမ်းမှာပြီးဆုံး ။ (စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ၁နာရီတိတိသာ)
ယခုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲသို့ ပါဝင်ဆင်နွဲလိုသူ ၊ ကူညီဆောင်ရွက်လိုသူ ၊ လှုဒါန်းကျွှေးမွေးလိုသူ မည်သူမဆို ဘာသာလူမျိုး မခွဲခြားပဲ ပါဝင် ၊ ကူညီ ၊ လှူဒါန်းခွင့် ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ -CJM-1900 CJM-
တောင်သာမြို့၊ သြဂုတ်လ (၁၇)ရက်
မြို့နယ်ဧရိယာအတွင်းရှိ ကားလမ်းမများဘေးတစ်လျှောက်တွင် ရှိသော ပြည်ခိုင်ဖြိုးကျေးရွာဆိုင်းဘုတ်များအား ဖယ်ရှားပေးရန် မြို့နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲရုံးသို့ ယခုလ ၂၇ရက်နေ့က တောင်သာမြို့နယ် NLDမှ တင်ပြအကြောင်းကြားထားကြောင်း CJ Myanmar သို့ တောင်သာဒေသခံတစ်ဦးကပြောကြားသည်။
မန္တလေးမြို့၊ သြဂုတ်လ (၂၇)ရက်
(ခေတ်အဆက်ဆက် အစဉ်အလာမပျက် ကျင်းပလျက်ရှိသည့် ရွှေဖျင်းညီနောင်ရဲ့  နတ်ပွဲတောင်ပြုံး)
လက်ထောက်ဆရာဝန် ရွေးချယ်ခန့်ထားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆရာဝန်များ၏ သဘောထား
မြို့၊ လ ရက်
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံလိပ်မူပြီး "လက်ထောက်ဆရာဝန် ရွေးချယ်ခန့်ထားရေးနှင့်ပတ်သက်၍
ဆရာဝန်များ၏ သဘောထားနှင့် တောင်းဆိုချက်များ"အား ဆရာဝန် (၈ဝ)ဦးက လက်မှတ်ထိုး၍ ပေးပို့
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ(၂၇)ရက်နေ့တွင် ဆရာဝန်(၈ဝ)ဦးက လက်မှတ်များထိုးပြီး "လက်ထောက်ဆရာဝန် ရွေးချယ်ခန့်ထားရေးနှင့်ပတ်သက်၍
ဆရာဝန်များ၏ သဘောထားနှင့် တောင်းဆိုချက်များ"အား သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံလိပ်မူပြီး ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း ပေးပို့ခဲ့သည့် ဆရာဝန်တစ်ဦးက CJMyanmar သို့ပြောကြားသည်။
သဘောထားအနေဖြင့် (၅)ချက်ရှိပြီး တောင်းဆိုချက်အနေဖြင့် (၄)ချက်ပါဝင်သည်။
ဆရာဝန်များ၏ သဘောထားနှင့် တောင်းဆိုချက်များနှင့်အတူ အချက်ကြီး(၇)ချက်၊ အပိုဒ်ခွဲ (၂၅)ခုပါဝင်သော
"ခေတ်စနစ်နှင့်မလျော်ညီသော အလုပ်ဝင်ခွင့်ရွေးချယ်မှုပုံစံများကြောင့် ဘွဲ့ရဆရာဝန်များ၏ တွေ့ကြုံခံစားနေရသော အခက်အခဲများ" စာပါ တစ်ပါတည်း ပေးပို့ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ဆရာဝန်များ၏ သဘောထားနှင့် တောင်းဆိုချက်များအား
၁။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန
၂။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
၃။ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ။
၄။ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်မှု ကော်မတီ
၅။ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပညာရေးမြှင့်တင်မှု ကော်မတီ
၆။ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့်လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
ဟူသည့် (၆)နေရာသို့လည်း မိတ္တူပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
To download PDF file of Myanmar Doctors' Right
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ (၁)ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က ကြီးမှူးကျင်းပမည့် လက်ထောက်ဆရာဝန်ဖြစ်ခွင့်အတွက် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများကို နေပြည်တော်၌ စတင်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါဝင်ခွင့်စာမေးပွဲမှ လက်ထောက်ဆရာဝန်ဦးရေ (၁၅ဝဝ) ခန့်ထားသွားမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်ရရန်နှစ်ချီစောင့်ဆိုင်းနေရသော ဆရာဝန်ဘွဲ့ရများ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုကြမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
ယခုနှစ် လက်ထောက်ဆရာဝန်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများတွင် ပထမအဆင့်အနေဖြင့် မြန်မာစာနှင့် အထွေထွေဗဟုသုတဘာသာများ၊ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာများကို ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယနှင့် တတိယအဆင့်အနေဖြင့် စိတ်အခြေအနေစစ်ဆေးခြင်းနှင့် လူတွေ့ နှုတ်ဖြေစစ်ဆေးခြင်းတို့ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
"လက်ထောက်ဆရာဝန် ရွေးချယ်ခန့်ထားရေးနှင့်ပတ်သက်သော Facebook Group အချို့"
လ/ထ ဆရာဝန် ရွေးချယ်ခန့်ထားရေး by UCSB
ဆရာဝန်များ၏ သဘောထားနှင့် တောင်းဆိုချက်များ"
၁။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ယခုရွေးချယ်စစ်ဆေးမှုသည် မဆလအစိုးရလက်ထက်တွင် အသုံးပြုခဲ့သော စနစ်ဖြစ်၍ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲခြင်းတစ်မျိုးဟု ယုံကြည်ပါသည်။
၂။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှကျင်းပသော စာမေးပွဲ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမှာ ပြည့်စုံ လုံလောက်မှုမရှိဟု ယုံကြည်ပါသည်။
၃။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးရွေးချယ်သော စာမေးပွဲသည် ဆရာဝန်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့် အတွက် ရှိရင်းစွဲလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကို အကောင်းဆုံးဖော်ထုတ် အသုံးချနိုင်မည်မဟုတ်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
၄။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ရွေးချယ်မှုသည် လက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးလိုသော ဆရာဝန် (၃၀၀၀)ကျော်ရှိသည့်အနက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် လက်ထောက်ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ အရည်အချင်းကို အပြည့်အ၀ ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိဟု ယုံကြည်ပါသည်။
၅။ လက်ထောက်ဆရာဝန်ရွေးချယ်မှုတွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ စစ်ဆေးရွေးချယ်မှုကို မလိုလား သော်လည်း ၀န်ထမ်းကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကို ခံယူရန်ဆန္ဒများရှိကြပါသည်။
၁။ လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူးခန့်ထားရေးတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဆရာဝန်များနှင့် သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုပုံစံဖြင့် တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ခန့်ထားပေးပါရန်။
၂။ ရွေးချယ်ခန့်ထားရာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တရားမျှတမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်။
၃။ အနာဂတ်တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လက်ထောက်ဆရာဝန်ခန့်ထားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တိကျသော စီမံချက်များ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ၊ ကြိုတင်ပြုလုပ်ပေးပါရန်။
၄။ ဆေးပညာဘွဲ့ရဆရာဝန်တိုင်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဆေးပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးဖော်ဆောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်။
အကြောင်းအရာ။ ။ ခေတ်စနစ်နှင့်မလျော်ညီသော အလုပ်ဝင်ခွင့်ရွေးချယ်မှုပုံစံများကြောင့် ဘွဲ့ရဆရာဝန်များ၏ တွေ့ကြုံခံစားနေရသော အခက်အခဲများ။
၁။(က) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ယခင်တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်တွင် နိုင်ငံ့လူဦးရေနှင့် ဆရာဝန် အချိုးအစားကို ဒေသတွင်း အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် တန်းတူညီမျှဖြစ်စေရန် ဆရာဝန်အရေအတွက် အား တိုးမြှင့်မွေးထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ တိုးမြှင့်မွေးထုတ်ခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံတော်တာဝန် ထမ်းဆောင် ရန် ဆရာဝန်အလုပ်ခေါ်ခြင်း၊ ခန့်အပ်ခြင်းများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ အလုပ်လက်မဲ့ဆရာဝန်ဦးရေ များပြားလာခဲ့ပါသည်။
(ခ) သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်တွင်မူ ပညာရှင်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဝေဖန်ထောက်ပြမှု၊ ပြည်သူလူထု၏ တောင်းဆိုမှု၊ အစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖော်ဆောင်မှု တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်တိုးမြှင့်ကာ အလုပ်လက်မဲ့ဆရာဝန်များ လျော့နည်းလာစေရန်လည်းကောင်း၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ အလဟဿမဖြစ်စေရန်အလို့ငှာ ဆရာဝန်များ အလုပ်ခန့်ထားခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
(ဂ) လွန်ခဲ့သော ၁၀ စုနှစ်ကျော်ကာလအတွင်း၌ လက်ထောက်ဆရာဝန် ခန့်ထားရေးတွင် ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူခန့်အပ်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၁-ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှစ၍ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ တစ်ဆင့် ခေါ်ယူခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၁-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်နေ့တွင် လက်ထောက် ဆရာဝန် (၅၀၀) ကို ရွေးချယ်ခေါ်ယူခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် စတင် အလုပ်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခု ၂၀၁၂ ခုအတွင်းမှာပင် လက်ထောက်ဆရာဝန် (၁၅၀၀) ထပ်မံရွေးချယ်ခန့်ထားရန် ၂-၇-၂၀၁၂ တွင် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှတဆင့် ကြော်ငြာ ခေါ်ယူခဲ့သည်ကို တွေ့ရပြီး သာမန်အားဖြင့် လက်ထောက်ဆရာဝန်ဖြစ်လိုသော လူငယ်ဆရာဝန်များ ကျေနပ်နှစ်သက်ကြသည်ကို သိရှိရပါသည်။
၂။ (က) သို့ရာတွင် ယခုကဲ့သို့ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှတဆင့် ဆရာဝန်များ အလုပ်ခေါ်ယူခန့်အပ်ခြင်း များကို အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်လျှင် ၀င်ရောက်ဖြေဆိုသူဆရာဝန်များ၊ အများပြည်သူများ၏ အမြင်တွင် ဝေဖန်ဆန်းစစ်စရာများ၊ ၀ိဝါဒကွဲပြားစရာများနှင့် မေးခွန်းထုတ်စရာများ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
(ခ) ပထမအကြိမ် လ/ထဆရာဝန် (၅၀၀) ခေါ်ယူရာတွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ လူတွေ့စစ်ဆေး မေးမြန်းခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ၀င်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့သူများနှင့် လေ့လာသူများတွင် ဝေဖန်စရာထောက်ပြ စရာများနှင့် မကျေနပ်မှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။
(ဂ) လူတွေ့မေးမြန်းစစ်ဆေးရာတွင်လည်း အဓိကသက်ဆိုင်သော ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အနည်းငယ်သာ မေးမြန်းခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ မေးမြန်းခဲ့သောမေးခွန်းအချို့မှာ ဖြေဆိုသူဆရာဝန်များနှင့် လုံးဝမအပ်စပ်သော မေးခွန်းများမေးခဲ့ခြင်းကို တွေ့ရပါသည်။ ဥပမာ-တံတားတစ်ခု၏အရှည်ကို ပေဖြင့်အတိအကျမေးခြင်း၊ လမ်းအရှည်ကိုမိုင်ဖြင့်အတိအကျ မေးခြင်း၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကာလဖြစ်၍ ကမ္ဘာသိအတိုက်အခံပါတီခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီး၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးစေသော Leading Question များမေးခြင်း။
(ဃ) ရွေးချယ်ခံရသူများနှင့် ရွေးချယ်မခံရသူများအကြား သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းမရှိခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်း၊ တိကျသေချာသော မူဝါဒကျင့်သုံးခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့မှုတို့ကြောင့်၊ ရွေးချယ်မခံရသူများအချို့များစွာ ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရပါသည်။
(င) ထို့ပြင် တပ်မတော်အရာရှိများ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် နီးစပ်ပတ်သက်သော ဆရာဝန် အများစု ရွေးချယ်ခံရခြင်းနှင့် ဆေးကျောင်းများတွင် ထူးချွန်ထက်မြက်ခဲ့သူအချို့ ရွေးချယ်မှု မခံရခြင်းတို့ကြောင့် ''ဘက်လိုက်မှုများ၊ အဂတိလိုက်စားမှုများ ရှိနိုင်သည်''ဟူသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာစေပြီး ၀င်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့သူများနှင့် အများပြည်သူတို့၏ သံသယကိုတိုးပွားစေခဲ့ပါသည်။ ဥပမာ-ဆေးတက္ကသိုလ်တွင် ဂုဏ်ထူးများဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သူတစ်ဦးကို နိုင်ငံခြားမသွားဘဲ ပြည်တွင်း တွင်သာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် သြ၀ါဒပေးပြီး ရွေးချယ်မှုမပြုခဲ့ခြင်း၊ စိတ်အခြေအနေပုံမှန် မဟုတ်သောဆရာဝန်တစ်ဦးအား အလုပ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ထိုဆရာဝန်အား တာဝန်မှ ရပ်နားထားသည်ဟု ကြားသိရပါသည်။
၃။ ထိုသို့ အများဝေဖန်မှုများရှိသဖြင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ယခုတစ်ကြိမ်တွင်ရွေးချယ်ရေးပုံစံကို ပြောင်းလဲခဲ့သော်လည်း ၀င်ရောက်ဖြေဆိုရမည့်သူများနှင့် လေ့လာသူအချို့က အရင်တစ်ကြိမ်ထက် ပိုမိုဆိုးရွားသော စနစ်တစ်ခုအဖြစ်သုံးသပ်ကြပါသည်။
(က) ယခုအကြိမ်ခေါ်ယူရာတွင် ယခင်လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အဆင်မပြေခဲ့သော ဆရာဝန်များအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲများ ပါဝင်လာပြီး ထိုစာမေးပွဲများသည် လက်ထောက်ဆရာဝန်ကောင်းတစ်ဦး၏ အရည်အချင်းကို တိုင်းတာရာတွင် သင့်တင့်လျောက်ပတ်မှု အရှိဆုံးပုံစံမဟုတ်ဘဲ ရှေးယခင်အစိုးရများ (မဆလ၊ န၀တ) လက်ထက်များတွင် ကျင့်သုံးခဲ့သော စနစ်ဟောင်းပုံစံ ဖြစ်နေခြင်းမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲတိုးတက်ရေးကို ဖော်ဆောင်နေသော လက်ရှိအစိုးရ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေပါသည်။
(ခ) ထိုရေး/ဖြေစာမေးပွဲတွင် မြန်မာစာ၊အင်္ဂလိပ်စာနှင့် အထွေထွေဗဟုသုတဘာသာရပ်များ ပါဝင်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝင်အဖွဲ့မှ ဖြေဆိုမည့်သူများကြိုတင်လေ့လာနိုင်ရန် ထုတ်ပြန် ထားသောမေးခွန်းဟောင်းပုံစံများအရ မေးမြန်းထားသောအကြောင်းအရာများမှာ ခေတ်နှင့်
လျော်ညီမှုရှိ/မရှိ၊ ဆရာဝန်တစ်ယောက်၏အလုပ်အကိုင်၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ ဆန်းစစ်စရာ များစွာရှိနေပါသည်။
ဥပမာ - အထွေထွေဗဟုသုတဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် မေးမြန်းသောမေးခွန်းပုံစံတွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာအများစုမှာ သင့်လျော်မျှတမှုမရှိသော၊ သဘာဝမကျသောမေးခွန်းများဟု ယူဆကြပါသည်။ သမ္မတကြီး၏မိန့်ခွန်းများ၊ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ၏မိန့်ခွန်းများကို သုံးသပ်ခိုင်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ အလွတ်ဖြေဆိုခိုင်းခြင်းမှာ အင်မတန်သဘာဝမကျသော မေးခွန်းများဖြစ်ပါသည်။ သမ္မတမိန့်ခွန်းဆိုသည်မှာ ပြောသူရော၊ သုံးသပ်သူများပါ အလွတ်ပြောဆိုခြင်း၊ ရေးသားခြင်း မပြုကောင်းပါ။(သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင် မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို စာရွက်များကြည့်ပြောခြင်း၊ လွှတ်တော်အမတ်များ အကြောင်းအရာတင်ပြလိုလျှင် စာရွက်များကြည့်၍ တင်ပြခြင်းမှာ သဘာဝကျပါသည်။)
(ဂ) ယခုမျိုးဆက်ဆရာဝန်များသည် ပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမည်ဆိုသောခေတ်၊ သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်မှုမရှိသောခေတ်များတွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသူများဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူများကို နိုင်ငံတကာ၏ နိုင်ငံရေးများအကြောင်း၊ ခေါင်းဆောင်များအကြောင်းကို ခုနှစ်သက္ကရာဇ်အတိအကျဖြင့် ဖြေဆိုခိုင်းခြင်းမှာ ''လသား ကလေးငယ်ကို ပြောင်းဆန်ထမင်းကျွေးနေသကဲ့သို့''ရှိပါသည်။
(ဃ) လက်ထောက်ဆရာဝန်တစ်ဦးအတွက် နိုင်ငံတကာပထ၀ီအနေအထားထက် လူ့ခန္ဓာကိုယ် ဖွဲ့စည်းပုံ အနေအထားကိုသိနေဖို့က ပို၍အရေးကြီးပါသည်။ သမိုင်းဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းများကို အလွတ်ရနေခြင်းထက် လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကို မှတ်မိနေရန် ပို၍အရေးကြီးပါသည်။
၄။(က) ဆရာဝန်တစ်ဦးသည် မိမိအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအတွက် လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ စာမေးပွဲကို မဖြစ်မနေဖြေဆိုရန်မလိုသော်လည်း ၂၀၀၈-ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ပုဒ်မ ၃၆၆(က)တွင် ''နိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထားသော ပညာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်အညီ ပညာသင်ကြားပိုင်ခွင့်ရှိသည်'' ဟူသော ပြဌာန်းချက်အရ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆေးပညာများ ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရန်မှာ အစိုးရလက်ထောက်ဆရာဝန်ဖြစ်မှသာလျှင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
(ခ) ရွေးချယ်ခြင်းမခံရသော ဆရာဝန်များသည် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ တက်ရောက်နိုင်မည့် အခွင့်အရေး မရှိသည့်အတွက် M.B.,B.S ဘ၀နှင့်သာ အဆုံးသတ်ရမည်လော ဟု မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
(ဂ) ရွေးချယ်မခံရသော်လည်း ငွေကြေးတတ်နိုင်သောမိဘများ၏ သားသမီးဆရာဝန်များသည် ပြည်ပနိုင်ငံများရှိ ဘွဲ့လွန်စာမေးပွဲများကို ၀င်ရောက်ဖြေဆိုနေကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ (ဥပမာ- MRC exam, AMC, USMLE) ထိုဆရာဝန်များသည် ပြည်ပတွင်ပညာသင်ကြားပြီး ပြည်ပတွင်သာ အခြေပြုနေထိုင်သွားခဲ့လျှင် ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် မွေးထုတ်ပေးခဲ့သော မိခင်နိုင်ငံအနေဖြင့် တန်ဖိုးရှိသော လူ့စွမ်းအားအရင်းမြစ်များ ဆုံးရှုံးခြင်းဟု မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။
(ဃ) အစိုးရ၀န်ထမ်းမဟုတ်သောဆရာဝန်များသည် ပြင်ပတွင် ဆေးကုသခွင့်ရှိသော်လည်း နိုင်ငံတော်၏ ဦးတည်ချက်(၁၂)ရပ်တွင်ပါဝင်သော ''တစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး'' ဟူသော ဦးတည်ချက် ပြည့်စုံရန်မှာ တိုင်းပြည်အခြေအနေအရ Private Sector များထက် Government/Public Sector များက ပိုမိုအရေးကြီးသည်ကို သတိပြုသင့်ပါသည်။ (ဥပမာ-ပြည်တွင်းတွင် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများစွာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော်လည်း ပြည်သူအများစုတို့သည် ထိုဆေးရုံများတွင် ကုသရန် ငွေကြေးပြည့်စုံမှုမရှိပါ။)
(င) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၅)ရက် ကသာမြို့၊ ကုတင်(၁၀၀)ဆံ့ဆေးရုံကြီးတွင် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းမှ လက်ရှိပြည်တွင်းဆရာဝန်ဦးရေမှာ ၂၆၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး ထိုဆရာဝန်ဦးရေ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံသာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရန် ခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဆရာဝန်နှင့် လူနာအချိုးအစားမှာ (၁း၃၀၀၀)ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုအချက်ကိုကြည့်လျှင် ရှိရင်းစွဲ တန်ဖိုးရှိလှစွာသော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို အပြည့်အ၀အသုံးမချနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ''တစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး'' ဦးတည်ချက်ကို မှေးမှိန်စေပါသည်။
၅။(က) လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို ကောင်းစွာအသုံးမချနိုင်သဖြင့် အခြေအနေအရ လက်ထောက် ဆရာဝန်ဦးရေကို (၁၅၀၀)သာ ခေါ်ယူနိုင်ခြင်းကို အများကလက်ခံနိုင်ကြသော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် ၁၀ စုနှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လက်ထောက်ဆရာဝန်များ တိုက်ရိုက် ခန့်အပ်ခဲ့ခြင်းကို ပြောင်းလဲ၍ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှတဆင့် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း မှာ မည်သို့မျှမသင့်လျော်ပါ။
(ခ) ဆရာဝန်များသည် ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များတွင် ပါဝင်သိရှိရမည်မှန်သော်လည်း လက်ထောက်ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ အဓိကလိုအပ်ချက်မှာ အများပြည်သူ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရေး၊ ဆရာဝန်ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ နိုင်ငံ၏ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် ကြံဆောင်ရေးတို့သာဖြစ်ပါသည်။
(ဂ) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အနေဖြင့် ဆရာဝန်များထံမှ မည်သည့် အရည်အချင်းများကို လိုချင်၍ ယခုစာမေးပွဲကို ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်း အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ရန်နှင့် အများပြည်သူသိစေရန် ကြော်ငြာခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ထို့ပြင် တရားမျှတ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသင့်ပါသည်။
(ဃ) ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လည်း ဆက်လက်တိုးချဲ့သွားမည့် လူထုကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် ပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များ၊ ရည်မှန်းချက်များ အနာဂတ်အလုပ်လက်မဲ့ဆရာဝန် နည်းပါးစေရေး ဦးတည်ချက်များ၊ ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ်လိုအပ်မှုများကို ပြည်သူအားလုံး သိရှိစေရန် အသိပေးကြော်ငြာသင့်ပါသည်။ အရွေးချယ်မခံရသော ဆရာဝန်များအနေဖြင့် နောက်တစ်ကြိမ်တွင် မည်ကဲ့သို့သောအရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံစေရန်ပြင်ဆင်ထားရမည်၊ မည်သည့်အချိန်တွင် နောက်တစ်ကြိမ်ခေါ်ယူမည်၊ လူဦးရေမည်မျှခေါ်ယူမည်ကို ကြိုတင်၍ တိကျသေချာစွာ ထုတ်ပြန်ပေးသင့်ပါသည်။
၆။(က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း အပိုဒ်(၂၁)အပိုဒ်ခွဲ(၂)မှာဆိုလျှင် လူတိုင်းတွင် မိမိ၏နိုင်ငံရှိ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့၌ ၀င်ရောက်နိုင်ရန် တူညီသည့်အခွင့်အရေးရှိသည်။ အပိုဒ်(၂၃)အပိုဒ် ခွဲ(၁)အရ လူတိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်ရန်လည်းကောင်း၊ မိမိနှစ်သက်ရာ အသက်မွေးမှု အလုပ်အကိုင်ကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ရန်လည်းကောင်း၊ တရားမျှတ၍ လုပ်ပျော်သော အလုပ်ခွင်၏အခြေအနေကိုရရှိရန်လည်းကောင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရခြင်းမှ အကာအကွယ်ရရှိရန်လည်းကောင်း၊ အခွင့်အရေးရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသောကြောင့် လက်ထောက် ဆရာဝန်ဖြစ်ခွင့်မရသော ဆရာဝန်များ၏ဘ၀သည် လူ့အခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀မရသောဘ၀များ ဖြစ်နေပါသည်။
(ခ) ၂၀၀၈-ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ''ပုဒ်မ (၂၅) နိုင်ငံတော်သည် အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင် များ၏အကျိုးကို ကူညီဆောင်ရွက်မည်၊ ပုဒ်မ(၂၈-က) နိုင်ငံတော်သည် ပြည်သူများ၏ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး တိုးတက်စေရေးတို့အတွက် အလေးထား ဆောင်ရွက်ရမည်၊ ပုဒ်မ(၃၁) နိုင်ငံတော်သည် ပြည်သူများ အလုပ်လက်မဲ့နည်းပါးစေရန် တတ်နိုင်သမျှ ကူညီဆောင်ရွက် ရမည်၊ ပုဒ်မ(၂၁-က) နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် တန်းတူညီမျှမှု အခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှုအခွင့်အရေးတို့ ခံစားခွင့်ရှိသည်'' ဟူ၍ ဖော်ပြထားသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၇။ (က) ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရမည်ဖြစ်သော လက်ထောက် ဆရာဝန်များ၏ အရည်အချင်းကို အဓိကသက်ဆိုင်သော ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးဆောင်ပြီး မစစ်ဆေးဘဲ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်စစ်ဆေးခန့်အပ်ခြင်းမှာ ခေတ်နှင့် မလျော်ညီသောစနစ်တစ်ခုဟု ယုံကြည်ပါသည်။
(ခ) ဆရာဝန်ဖြစ်ထိုက်သဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ (ဆမ)လက်မှတ်အပ်နှင်းထားပြီးဖြစ်သော ဆရာဝန်များမှ မိမိနိုင်ငံအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုသောကြောင့် အလုပ်လျှောက်ထားရာတွင် ယခင်ကအတိုင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသာ တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူခန့်အပ်ခြင်းကိုသာ လိုလားပါသည်။ စနစ်ကျသောတရားမျှတသည့်မူမရှိဘဲ ရွေးချယ်သည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲ များကြောင့် သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်၏ Clean Government မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာ နိုင်ပါသည်။
(ဂ) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ယခုပုံစံမျိုးဖြင့် ရွေးချယ်မှုများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်နေမည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံအပေါ် စေတနာထားပြီး လက်ထောက်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ၀န်ထမ်းဖြစ်လိုသော ဆရာဝန်များကို လည်း စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားစေပြီး တန်ဖိုးရှိသည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များလည်း ဆုံးရှုံးယုတ်လျော့ သွားစေနိုင်ပါသည်။ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်၏ အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်သော တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများစွာ ဖြစ်ထွန်းလာသော်လည်း ကျောင်းပြီးစ ဆရာဝန်များ၏ဘ၀များသည် ယခင်အစိုးရလက်ထက်ကထက်ပင် ပိုမိုဆိုးရွားသောစနစ်နှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်ကို သမ္မတကြီး၊ ဆရာဝန်ဖြစ်သော ဒုတိယသမ္မတကြီး၊ အဓိကသက်ဆိုင်သော ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အထူးတလည် ပြုပြင်ပေးစေလိုပါသည်။ တရားဥပေဒစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ လွှတ်တော် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများ၊ လွှတ်တော်အမတ်မင်းများအနေဖြင့် လက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်လိုသောဆရာဝန်များအတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေသော အကျိုးမရှိသည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သဘောထားတိုက်ဆိုင်သော အချက်များရှိပါက လွှတ်တော်အတွင်း တင်ပြဆွေးနွေးပြီး အရေးတယူဆောင်ရွက်ပေးစေလို ပါကြောင်း ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါသည်။
ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ၉ ဦးကို ယနေ့ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ပြောင်းလဲ တာဝန်ပေးအပ်
သြဂုတ် လ (၂၇) ရက်
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၂ နှင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ အရ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ၉ ဦးကို ယနေ့ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ပြောင်းလဲ တာဝန်ပေးအပ်ကြောင်းကို နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားကြောင်း CJMyanmar မှ သတင်းရရှိပါသည်။
Asia World ကုမ္ပဏီအား ကြည့်မြင်တိုင်ပြည်သူများ ဆန္ဒပြ
ရန်ကုန်မြို့၊ သြဂုတ်လ (၂၅)ရက်
ကြည့်မြင်တိုင် သီရိမင်္ဂလာဈေးဟောင်း ဘေး ရေမြောင်းအား Asia World ကုမ္ပဏီက ပိတ်ဆို့လိုက်သည့်အတွက် ကြည့်မြင်တိုင်ပြည်သူများ မကျေနပ်သဖြင့် ယမန်နေ့ ညနေ လေးနာရီ ၁၅ မှစတင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဆန္ဒပြသူများက ဘုရင့်နောင်လမ်းကိုပိတ်ဆို့လိုက်ကြသည်။ ညကိုးနာရီကျော်တွင် သက်ဆိုင်ရာမှ လာရောက်လမ်းရှင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ဆန္ဒပြသူများက လမ်းကိုပြန်လည်ပိတ်ဆို့ခဲ့ကြပြန်သည်။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများရောက်ရှိလာကာ ညှိနိုင်းပေးပြီး ကုမ္ပဏီ မှ ဆိုက်မန်နေဂျာ ထွက်၍ တောင်းပန်မှသာလူစုကွဲသွားခဲ့သည်။
Myanmar Job Fair 2012
သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ - CJM-666
ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ပြုလုပ်သော Myanmar Job Fair 2012 ပွဲ ကို ရန်ကုန်မြို့ တပ်မတော်ခန်းမ တွင် သြဂုတ်လ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိနေပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း စောင့်မျှော်သူများဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိကြောင်း CJ Myanmar မှ သတင်းရရှိပါသည်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ကုမ္ပဏ္ဏီ ၆၀ ကျော်ခန့်မှ ဝန်ထမ်းများ ခေါ်ယူနေပြီး နေ့ချင်း အင်တာဗျူး များလဲ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
စာရင်းကိုင်၊ မန်နေဂျာ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှုးများမှ အစ အခြေခံ ဝန်ထမ်း၊ ယာဉ်မောင်းများ အထိခေါ်ယူနေပြီး နေ့စဉ် လျောက်ထားသူပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ခန့် အနည်းဆုံး ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ ကျောင်းပြီးစ လူငယ်အများ လျောက်ထားမှု့ များကြောင်း သိရှိရသည်။ "လောလောဆယ် ကြီးကြပ်ရေးမှုး နေရာခေါ်နေတဲ့ အလုပ် ၃ ခုလျောက်ခဲ့ပါတယ်၊ ကျွန်တော်က အရင်က စင်ကာပူမှာ လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံ ရှိလို့ လျှောက်ဖြစ်တာပါ၊ Myanmar Brewery company မှာ လျှောက်တော့ တစ်ခါတည်း အင်တာဗျူး ဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
ပြည်တွင်းမှ နာမည်ကျော် company များလဲ ပါဝင်ပြီး ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ နည်းပညာ၊ ဝန်ဆောင်မှု့၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု့လုပ်ငန်းများ၊ စာနယ်ဇင်းနှင့် မီဒီယာ လုပ်ငန်းများနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပြသသည်ကိုတွေ့ရပြီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသော လုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်သည်ကို သိရှိရပါသည်။ လျှောက်ထားသူ အများစုမှာ နောက်ပိုင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့ များပြားလာပါက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နှင့် ဝင်ငွေများတိုးပွားလာနိုင်မည်ဟု CJ Myanmar ကို ခန့်မှန်းပြောကြားကြပါသည်။ Posted by
ပန်းချီထိန်လင်းရဲ့ ဉာဏ်ရှေ့သွားအနုပညာမိတ်ဆက် ပါဖောမန့်ပွဲကျင်းပ။
မန္တလေးမြို့၊ သြဂုတ်လ (၂၅)ရက်
အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်လျှက်ရှိသော ပါဖောမန့်အနုပညာရှင် ပန်းချီ ထိန်လင်းရဲ့ ဉာဏ်ရှေ့သွားအနုပညာမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို သြဂတ်လ ၂၅ရက်နေ့ ယနေ့နံနက် ၉နာရီအချိန်တွင် မန္တလေးမြို့ ၆၉လမ်းနှင့် ၃၇လမ်းထောင့်ရှိ Mandalay Contemporary Art Center (MCAC) ခန်းမတွင် ပထမပိုင်း (Artist Talk) အစီအစဉ်ဖြင့် စတင်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း CJ Myanmar မှသိရှိရသည်။ အခမ်းအနားဒုတိယပိုင်းအနေဖြင့် အဆိုပါ ခန်းမတွင် နေ့လည် (၁)နာရီမှ (၃)နာရီအချိန်ထိ ပါဖောမန့်အနုပညာ ပြသခြင်းများကို Workshop ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားကို မန္တလေးမှ အနုပညာချစ်မြတ်နိုးသူများ၊ စာရေးဆရာများ၊ ပန်ချီဆရာများ၊ ပါဖောမန့်အနုပညာရှင်များနှင့် မြို့ခံ စာနယ်ဇင်းဆရာများ၊ အွန်လိုင်းမီဒီယာများ (၁၀၀)၀န်းကျင်ခန့် တတ်ရောက်ခဲ့ကြောင်း CJ Myanmar မှ သတင်းရရှိသည်။ ပန်းချီ ထိန်လင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစောဆုံး ပါဖောမန့်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သည်။
ပြည်မြို့၊ သြဂုတ်လ (၂၅)ရက်
မန္တလေးမြို့၊ သြဂုတ်လ (၂၄)ရက်
မန္တလေး သြဂုတ်(၂၄) ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာလ မှစတင်၍မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကို Center of Excellence (COE) အဖြစ်အဆင့် တိုးမြှင့် ဖွင့် လှစ်နိုင်ရန် အဆင့် မြင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာအောင်ကျော်မြတ်၊ ၊စက်မှူနှင့် သက်မွေးပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မင်းအောင်တို့ နှင့် ယခင် MIT ကျောင်းသားဟောင်းများတွေ့ ဆုံပွဲကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီက မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်ပင်မဆောင်စည်းဝေးခန်းမတွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုသိုဖွင့် လှစ်ရာတွင်လိုအပ်သောအကူအညီအထောက်အပံ့ များပေးနိုင်ရန်အတွက် မန္တလေးစက်မှုတက္ကသိုလ်/မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြင့် ဖွဲ့ စည်းခဲ့ ပါသည်။နာယက၁။ဒေါက်တာအောင်ကျော်မြတ်၂။ဒေါက်တာဇော်မင်းအောင်၃။ဒေါက်တာမြင့် သိန်းဥက္ကဌ ကိုပြည်မိုးဒု-ဥက္ကဌ ၁။ကိုလှအောင်၂။ကိုမိုးနိုင်ဦး၃။ကိုကြည်သာမြင့် ၎။ကိုစစ်သွေးကျော်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကိုဌေးဝင်းအောင်တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၁။ကိုမိုးထိန်း၂။ကိုနိုင်ဝင်း၃။ကိုစိုးထွန်း၎။ကိုသက်နိုင်စိုး၅။ဒေါ်အေးအေးမော်၆။ဒေါ်နွယ်နွယ်မွန်၇။ဒေါ်ခင်ဝင်းနွယ်ကော်မတီဝင်များ၁။ကိုညဏ်မောင်မောင်ဝင်း၂။ကိုသန်းဇော်ထွေး၃။ကိုဖြိုးဝေအောင်၎။ကိုအောင်လွင်အေး၅။ကိုလင်းအောင်၆။ကိုသူရလွင်၇။ကိုကျော်နိုင်လင်း၈။ကိုစ၀်ခွန်ဦး၉။ကိုအောင်အောင်၁၀။ကိုမန်းဗဟာဒူး၁၁။ကိုသီဟဦး၁၂။ကိုဇော်ဇော်ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် တို့ကို ယခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှစတင်၍ ကျောင်းသား ၂၅၀စီလက်ခံကာ အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများရှိနည်းပညာတက္ကသိုလ်များကိုလည်း ထပ်မံအဆင့်တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း CJMyanmar မှသိရှိရသည်။
သဘင် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ - CJMyanmar
မန္တလေးမြို့၊ သြဂုတ်လ (၂၁) ရက်
၂၁.၈.၂၁၀၂ရက်နေ့၊ မန္တလေးမြို့ ၂၇လမ်းနှင့်၆၄လမ်းထောင့်ရှိ အိုရီယမ်တယ်ဟောက်ခန်းမ တွင်
(၁၀)ကြိမ်မြောက် သဘင် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ ကိုည၇နာရီမှ၁၀နာရီအထိကျင်းပခဲ့ သည်ဟုသတင်းရရှိပါသည်။
မန္တလေးမြို့၊ သြဂုတ်လ (၂၂)ရက်
မန္တလေး သြဂုတ်(၂၂) ယနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ၅၀ မိနစ် က မန္တလေးမြို့ ၆၂ လမ်းနှင့် သရဖီလမ်းထောင့် သူနာပြုတက္ကသိုလ် အရှေ့မြောက်ထောင့်တွင် ပြိုင်ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်တိုက်မိရာ ဆိုင်ကယ်စီးသူမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိသွားကြောင်းသိရသည်။
ဝီရသူ (မစိုးရိမ်) ဦးဆောင်ကျင်းပမည့် မြို့လုံးကျွှတ...
ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ၉ ဦးကို ယနေ့ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့...
Asia World ကုမ္ပဏီအား ကြည့်မြင်တိုင်ပြည်သူများ ဆန္ဒြ...
ပန်းချီထိန်လင်းရဲ့ ဉာဏ်ရှေ့သွားအနုပညာမိတ်ဆက် ပါဖော...
မန္တလေးမြို. ၊မြရည်နန္ဒာ ရပ်ကွက် ကျူးကျော်တဲများ
ဓာတ်ဆီ ဆိုင်ဖွင့်ရန် ကိစ္စ ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားများ ...
ဓမ္မကြေးမုံ ရှင်သာမဏေစောင့် ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (Novice ...
ပုသိမ်မြို့ ရပ်ကွက် အချို့ ရေနစ်မြုပ်
ညီညွတ်ကတ်ဖို့ ရခိုင်ရို့ 
စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ် သီးသန့်လမ်းများအတွင်း ကားများပိတ်...
စစ်တွေတက္ကသိုလ်သည် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပြီး တက္ကသ...
ငွေလွှဲနှုန်းလျော့ချခဲ့သော ဘဏ်များ အခြား ဘဏ်များ၏ တု...
CJ Myanmar သို့......ကားတင်သွင်းသူတစ်ဦး၏ ပေးစာ
"HFMD (သို့မဟုတ်) လက်၊ ခြေထောက်၊ ပါးစပ် ရောဂါ"
“မိုးကောင်းကင်၌ တိမ်တိုက်များ” စာအုပ်ကို စာရေးသူ က...
မြန်မာ facebook Page များကို တိုက်ခိုက်ရန် ရည်ရွယ်...
မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေဝန်ဆောင်မှုအသင်း၊ မန္တလေးတို...
MJA ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) ဖွဲ...
"Welcome to Myanmar"
မန္တလေးမြိ့ရှိ မီဒီယာသမားများ ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေစဉ်
STOP KILLING PRESS !!!!
ဧရာဝတီ မြစ်ရေတိုးနေမှုကြောင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ...
ခေါင်တုန့်စည်ကျေးရွာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကျေ...
မင်းကွန်း ဘိုးဘွားရိပ်သာ ဝါဆိုသင်္ကန်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်း...
ဝါဆိုလပြည့်နေ့တွင် တောင်သမန်အင်း ဦးပိန်တံတား အထူး...
ယခုနှစ် ဝါဆိုလ ဧရာဝတီမြစ်ရေတက်နေသည်ကို မင်းကွန်းဘိ...
CJ Myanmar သို့ ပေးပို့လာသော မန္တလေးသားတစ်ဦး၏ ရင်ဖ...
CJ Myanmar သို့ ရင်ဖွင့်ပေးစာ
မန္တလေး မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ် အရှေ့မုဒ်လမ်းမှ စည်...
မြန်မာပံ့ပိုးကူညီသူများအဖွဲ့၏ (၆)ကြိမ်မြောက် ပံ့ပိ...
သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ - CJM-Myanmar
ရတနာပုံတံတားပေါ်တွင် ဆိုင်ကယ်နှစ်စီး မျက်နှာချင်းဆိ...
ဧရာဝတီမြစ်ရေကြီးလာသည်နှင့်အမျှ တောင်သမန်ရေ တတ်လာသည...